Amandla amaza avela ekuhambeni kwamaza | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Nuria | | Amandla eNtshukumo
Amaza olwandle ayiluncedo kubatyibilikisi kuphela kodwa sonke singathatha ithuba lamandla aveliswa kukujikeleza kwawo ukuvelisa umbane ngetekhnoloji efanelekileyo kuyo. Amandla angangcolisiyo avuselelweyo abizwa ngokuba ngumbane okanye umbane wamaza kwaye ukuza kuthi ga ngoku zimbalwa iiprojekthi emhlabeni njengoko itekhnoloji yayo ibiza kwaye inzima.
E-Spain, amandla e-wave awasetyenziswanga ngokuthengisa, zimbini kuphela izikhululo zovavanyo kuLuntu lwaseCantabria kunye nelizwe laseBasque, kwaye enye ikumbhobho waseGranadilla, eTenerife.
Amandla aveliswa ngamaza adityaniswa iibhuyi ezihla zinyuka kwipiston, apho kufakwa khona impompo ye-hydraulic. Amanzi ashiya angene empompini kwaye ngokuhamba kuqhuba umbane ovelisa umbane othunyelwa emhlabeni ngentambo yolwandle.
Inkampani Iberdrola faka isityalo ukuba sisebenze, kwi CantabriaKude kube ngoku, ifake i-buoys ezili-10 kubunzulu beemitha ezingama-40 phakathi kwe-1,5 ne-3 yeekhilomitha ukusuka elunxwemeni, isityalo sithatha indawo yeekhilomitha ezingama-2 XNUMX.
Iiboyy zinamandla e-1,5 MW, zinyuka zisihla ngokubhijela kwaye zikhulule intambo eshukumayo umvelisi.
Iberdrola iqinisekisa ukuba enye yeenzuzo zayo kukukhuseleka kwayo kuba ingene emanzini, enye iya kuba kukuqina kwayo okukhulu kwaye ngokwenkampani, ifuthe lokusingqongileyo lincinci.
Kwinxalenye yayo, kwiMotrico, Ilizwe laseBasque, indawo yokulinga okwangoku iyakhiwa apho i-buoy enetekhnoloji ebizwa ngokuba ikholamu yamanzi ejikelezayo. Njengokuba amanzi engena kwikholamu, anyanzela umoya kwikholamu ukuba udlule kwiinjini yomoya kwaye wandise uxinzelelo ngaphakathi kwikholamu. Xa amanzi ephuma, umoya ubuyela umva ngokusebenzisa iiturbine kuba icala lolwandle lweturbine inexinzelelo oluncinci. Iinjini ejikeleza kwicala elinye kwaye ibangele ukuba umvelisi avelise umbane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Amandla eNtshukumo » Amandla amaza avela ekuhambeni kwamaza
Iiphaneli zelanga zinokubonelela ngezibhedlele ngamandla